Madasha xisbiyada oo war culus ka soo saartay doorashadii Dhuusamareeb – Hornafrik Media Network
Madasha xisbiyada oo war culus ka soo saartay doorashadii Dhuusamareeb
By Liibaan Nuur	 On Feb 3, 2020
War-saxaafadeed ku qornaa af-qalaad oo ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ayaa waxaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee Galmudug iyo doorashadii shalay ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug.
War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in doorashadii uu ku soo baxay Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor aysan aheyn mid loo qabtay si xor ah, isla markaana aysan ku dhicin nidaam lagu wada qanacsanyahay.
Qoraalka ayaa sidoo kale lagu dhaliilay taalabadadii safiirka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto uu ku aqoonsaday masuulka ku soo baxay doorashadaas oo ay ku tilmaameen mid la boobay.
Warkan ayaa lagu sheegay in doorashadaas lagu dhiiraday in la qabto iyadoo aan xal laga gaarin khilaaf siyaasadeed oo ka dhexeeya dhinacyada u hanqal taagayey doorashada madaxtinimo ee maamulka Galmudug.
Madasha xisbiyada qaran oo ay ku mideysan yihiin illaa lix xisbi siyaasadeed ayaa ka dalbatay dhinacyada isku haya siyaasadda Galmudug in ay yeeshaan wadahadal dhab ah, si xal looga gaaro xiisadaha taagan.
AMISOM oo war ka soo saartay doorashadii Galmudug
Al-Qacidada Jasiiradda Carbeed oo sheegatay weerarkii Pensacola